အင်းကျား - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်းကျား (Clouded Leopard)
နတ်ချ်ဗီလီ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၌ရှိသော အင်းကျားတစ်ကောင်၏ ပုံ
၂၀၁၆ ခုနှစ်က အင်းကျားများ နေထိုင်ကျက်စားခဲ့ရာ ဒေသများ
အင်းကျား (Clouded leopard) သည် ကြောင်မျိုးရင်းဝင် တိရစ္ဆာန်များအနက် အလယ်အလတ် အရွယ်အစားရှိသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီး ဟိမဝန္တာတောင်ခြေဒေသများမှနေ၍ ဗဟိုအရှေ့တောင်အာရှဒေသများအပြင် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းအထိပါ ဖြန့်ကျက်တွေ့ရှိရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ IUCN အနီရောင်စာရင်းတွင် ၎င်းတို့အား အားနည်းသော မျိုးစိတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အင်းကျား အကောင်ရေစုစုပေါင်းအနေဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးအကောင်ရေ ၁၀၀၀၀ အောက်သာရှိပြီး ဒေသတစ်ခုစီ၌ အရွယ်ရောက်စအကောင်ရေ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသော ဒေသဟူ၍မရှိဟုခန့်မှန်းထားသည်။
အင်းကျား၏ ပါဏဗေဒအမည်မှာ ‘နီရိုဖဲလစ် နီဘူလိုစာ (Neofelis nebulosa)’ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အင်းကျားကို Mainland Clouded Leopard ဟုခေါ်ဆိုပြီး တရားဝင်သတ်မှတ်မထားသည့် ၎င်း၏မျိုးစိတ်ကွဲ "စူမတြားအင်းကျား (N. diardi)" ၏ အမည် (Sunda Clouded Leopard) နှင့် ကွဲပြားစေရန်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Meghalaya ပြည်နယ်၏ အထိမ်းအမှတ်တိရစ္ဆာန်လည်း ဖြစ်သည်။
၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် Edward Griffith ဆိုသူမှ တရုတ်နိုင်ငံမှရရှိသည့် အင်းကျား သားရေဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြသ၍ Felis nebulosa ဟူသော အမည်ကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၁၈၄၁ ခုနှစ်တွင် Brian Houghton Hodgson ဆိုသူမှလည်း နီပေါနိုင်ငံမှရရှိသည့် အင်းကျားနမူနာဖြင့် Felis macrosceloides ဟူသော အမည်အား အဆိုပြုခဲ့ဖြစ်သည်။  ၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် Robert Swinhoe ဆိုသူကလည်း ထိုင်ဝမ်မှရရှိသော အင်းကျား သားရေဖြင့် Felis brachyura ဟူသော အမည်အား အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၁၈၆၇ ခုနှစ် တွင် John Edward Greyဆိုသူမှ Neofelis ဟူသော မျိုးစုအမည်အား အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ပြီး မျိုးစိတ် သုံးမျိုးစလုံးအား ထိုမျိုးစု၏အောက်သို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် မျိုးစိတ်ကွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လုံလောက်သည့် သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်းကြောင့် တစ်ခုတည်းသော မျိုးစိတ် (Neofelis nebulosa) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
"အင်းကျား" (N. nebulosa)
စူမတြားအင်းကျား (N. diardi)
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "Species Neofelis nebulosa"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ p. 545–546။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Gray, T. (2021). "Neofelis nebulosa". IUCN Red List of Threatened Species 2021. IUCN.
↑ ၃.၀ ၃.၁ "A revised taxonomy of the Felidae: The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group" .
↑ State Animals, Birds, Trees and Flowers of India (2011)။
↑ Griffith, E. (1821)။ "Felis nebulosa"။ General and particular descriptions of the vertebrated animals arranged comfortably to the modern discoveries and improvements in zoology။ London: Baldwin, Cradock & Joy။ p. 37။
↑ Hodgson, B. H. (1841). "Classified Catalogue of Mammals of Nepal".
↑ Hodgson, B. H. (1853). "Felis macrosceloides".
↑ Swinhoe R. (1862). "On the mammals of the Island of Formosa (China)".
↑ Gray, J. E. (1867). "Notes on the skulls of cats (Felidae)".
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်းကျား&oldid=728251" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။